August 2, 2019 - Myitter
August 2, 2019 Myitter 0
၀မ်းချုပ်နေသည့် အသက် ၄ နှစ်အရွယ် ကလေးငယ် ဆေးမှားသွင်းမှု၊ ခွဲစိတ်မှု မှားယွင်းမှုများကြောင့် သွေးဆိပ်တက် သေဆုံးမှု ဘယ်သူက တာဝန်ယူမလဲ
၀မ်းချုပ်နေသည့် အသက် ၄ နှစ်အရွယ် ကလေးငယ် ဆေးမှားသွင်းမှု၊ ခွဲစိတ်မှု မှားယွင်းမှုများကြောင့် သွေးဆိပ်တက် သေဆုံးမှု ဘယ်သူက တာဝန်ယူမလဲ ခွဲစိတ်မှု မှားယွင်းသဖြင့် ကွယ်လွန်ခဲ့သော ၄ နှစ်အရွယ် မောင်ဇွဲမာန်ဖြိုးဦး၏ ဖခင်ဦးစိုးသီဟနှင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက် ရန်ကုန်မြို့ ၊ အင်းစိန်မြို့နယ်တွင် နေထိုင်သော အသက် […]
မတ္တရာမှာ (၇)နှစ်အရွယ်သမီးလေးကို နောက်အိမ်ထောင် ပထွေးက မုဒိန်းကျင့်တာ သမီးလေးကို ” သမီးအဖေအခန့်ထဲမှာစာအုပ်သွားယူပေးပါလား”ဆိုပီး ….. ကလေးမလေးက အခန့်ထဲဝင်သွားတာနဲ့ (၃)ကျိန်တိတိမုဒိန်းကျင့်ခဲ့တာ အခုတော့ ဆေးကုသနေပါတယ်…😭😭 မိန်မတွေလဲ ယောက်ျားယူရင် ကြည့်ပီယူကြပါ ကလေးမလေးသနားပါတယ်…..Credit –မောင် မြန်​မာပြည်​မှာ ဒီလိုမျိုးအမြဲ ကြားနေရတယ်​ ​….တွေ့လဲ​တွေ့ဘူးပါတယ်​ ….လိုးဝစဉ်းစားလိုမရတဲ့ အ​ဖြေတခုပါ […]
နှစ်ပေါင်း ၃၀ လောက် နှိပ်ဆက်ခဲ့တဲ့ ကြမ်းပိုး ဒီနည်းနဲ့မှ အမြစ်ပျက်တော့တယ် လွယ်လိုက်တဲ့နည်း
မိဘ များက မိမိတို့ရဲ့ ရင်သွေးကလေးများကို ဖဝါးလက်နှစ်လုံး ပခုံးလက်နှစ်သစ် လူဖြစ်လာကတည်းက ဝါးဖတ်တော် ကစီဓာတ်နဲ့လူဖြစ်အောင် ကျွေးမွေးလာခဲ့ကြတဲ့အပြင် ခြင်၊ ကြမ်းပိုး မထိုးရအောင် ဂရုစိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ည ကျရင် ကလေးအိပ်ရာထဲမှာ ကြမ်းပိုးရှာပေးရတာနဲ့ မအိပ်ရတဲ့ မိဘတွေရှိကြပါတယ်။ မေတ္တာပို့တဲ့အထဲမှာ ကြွက်၊ ခြင် ၊ ယင်၊ […]
သို့ … မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင် သိစေရန် ပြည်သူအတွက် ကူညီပါရစေဆိုတဲ့ ပြည်သူ့ရဲတဲ့လား …
သို့ … မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင် သိစေရန် ပြည်သူအတွက် ကူညီပါရစေဆိုတဲ့ ပြည်သူ့ရဲတဲ့လား … စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး မော်လိုက်ခရိုင် ဖောင်းပြင်မြို့နယ် 29.7.2019 ည ၉နာရီ အချိန်ခန့် မြသီဂီ င်္စည်ဘီယာဆိုင်မှာ လမ်းအထူး(၈)အဖွဲ့မှ ဘက်ဟိုးကားမောင်းဝန်ထမ်း က်ိုကောင်းမြတ်နိုင် နှင့် ကိုဇော်နိုင်ဦး(ခ)ကတုံး တို့ထိုင်နေစဉ် […]
ဖေဖေ့သားလေး အဖေတို့ဆီနောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာခဲ့ပါ အဖေနဲ့အမေ စောင့်နေပါတယ်….
အဖေ့ရင်တွေ နာလွန်းလှပါတယ် သားလေးရေ ဖေဖေ့သားလေး အဖေတို့ဆီနောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာခဲ့ပါ ….အဖေနဲ့အမေ စောင့်နေပါတယ်….😢😢😢 မိသားစုနဲ့ထပ်တူခံစားရပါတယ်သားလေးရေ…. နောက်ဘဝဆိုတာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီလိုဝေဒနာဆိုမျိုးမခံစားရပါစေနဲ့…. ကောင်းတဲ့ဘုံမှာစံမြန်နိုင်ပါစေသားလေးရေ…. ဖြူ စင်​​စေတနာရဲ့ ချစ်​လှစွာ​သော သားဇွဲရဲ့ ​နောက်​ဆုံးခရီး😥😥😥 ဘဝတစ်​ခု ပြီးပြန်​ပြီ​ပေါ့😥😥😥😥😥 ​ကောင်းရာမွန်​ရာ ဘုံဘဝကို ​ရောက်​ရှိပါ​စေသား​ရေ😥😥😥 ဘဝဆက်​တိုင်း သက်​ရှည်​ကျန်းမာတဲ့ဘဝကိုပဲ ပိုင်​ဆိုင်​နိုင်​ပါ​စေ…. သဂြိုလ်​ပြီးချိန်​ 11:30 […]
လက်မထပ်ခင်အတူတူနေတာကို ထောက်ခံသွားတဲ့ မော်ဒယ် ထက်ထက်ထွန်း
လက်ရှိအချိန်မှာ မော်ဒယ်လ်လောကမှာလည်း လူသိများလာပြီး ချစ်စဖွယ်ရုပ်ရည်လေးနဲ့ ချောမောလှပပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးလက်ခံ ချစ်ခင်မှုကို ရရှိနေတဲ့ အလှမယ် ထက်ထက်ထွန်းကတော့ အခုတွေအခုကြိုက်အခုယူပြီး ကွဲကြတာထက်စာရင် လက်မထပ်ခင် အတူတူနေကြည့်တာက မှန်နေသလားပဲလို့ Sunday ရဲ့အင်တာဗျူးမှာပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ ထက်ထက်ထွန်းက “တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်နားလည်မှုနဲ့ရှေ့ဆက်နေကြရင်တော့ ဘာမှတော့ပြောစရာမရှိပါဘူး။ ဘယ်လိုပြောမလဲ ချက်ချင်းကြီး အခုကြိုက်အခုတွဲ အခုယူလိုက်ပြီးတော့မှ […]
ဘန်ကောက် နေရာ ၃ နေရာတွင် ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွား..
ဘန်ကောက် နေရာ ၃ နေရာတွင် ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွား ချောင်းနုံစီမိုးပျံရထားဘူတာ၊ ရာမ ၉ လမ်း မြက်ခင်းထဲမှာ တစ်နေရာနဲ့ ကျန်ဝတ္ထနာ အစိုးရ ရုံးဝင်းထဲမှာ တစ်နေရာ စုစုပေါင်း ၃ နေရာမှာ လက်လုပ်ဗုံးတွေ ပေါက်ခဲ့ပြီး သန့်ှင်းရေးအလုပ်သမား ၂ ယောက် ထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ပထမ […]
ငယ်ငယ်က ဆော့စရာပေးခဲ့တဲ့ ဦးလေးကို (၁၅)နှစ်အကြာမှာ ကားလက်ဆောင် ပြန်ပေးခဲ့သူ
ကျွန်တော်တို့ဘ၀တွေမှာ ငယ်ငယ်က ဦးလေးတွေ၊ အဒေါ်တွေကပဲဖြစ်ဖြစ် မုန့်ဖိုး၊ အရုပ်စတဲ့ တစ်ခုခုပေးတာမျိုးကြုံခဲ့ဖူးမှာပါ။ ကိုယ်လိုချင်တဲ့အရုပ်လေးကို အပေးခံရတာမျိုး၊ စားချင်တဲ့မုန့်လေးတွေ ၀ယ်ကျွေးခံရချိန်မှာ တစ်ချိန်ကျရင် ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့အခါ ဒီလိုမျိုးလေးပြန်လုပ်ပေးမယ်လို့ တွေးထားတာရှိပါတယ်။ ငယ်ဘ၀ ဒီလိုမျိုးအကြံအတိုင်း အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သူကတော့ စတီဗင် အီလိရော့ ဆိုတဲ့ ဆိုရှယ်မီဒီယာအသုံးပြုသူတစ်ဦးကပါပဲ။ သူ့ဘ၀ငယ်စဉ်က ဈေးအရမ်းကြီးပြီး၊ လိုချင်မိခဲ့တဲ့ […]
ရင်နာတယ် အဖေ့သားလေးရေ၊ ငါ့သားလေး မသွားချင်ပါဘူးလို့ ခဏခဏပြောနေတဲ့ကြားက အဖေတို့ခေါ်သွားမိခဲ့ တာလေ ဒီလိုတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာကို အဖေသားလေး ကြိုများသိနေသလား သားလေးရယ်၊ သားရယ် အဖေတို့က ကောင်းစေချင်တဲ့ မေတ္တာနဲ့ ဒီနေရာကိုခေါ်လာခဲ့မိတာပါ ငါ့သားရယ်၊ ဒါပေမဲ့မျှော်လင့်ထားသလို ဖြစ်မလာခဲ့ပဲ မမျှော်လင့် ထားတာတွေဖြစ်လာခဲ့ရတယ်ငါ့သားရယ်။ အဖေ့သားလေးလည်းပါတယ်လေ ခွဲစိတ်ဆရာမကြီး ဆီသွားတွေ့တော့ သူကပြောတယ်လေကွာ […]